ဧရာ | ဧရာမ, ဧရာတောင်တန်း, ခကျြပရဒိသု
ဧရာမတောင်တန်း (ဂြာမနျတွင် Riesengebirge, ပိုလနျ Karkonosze) geomorphological ယူနစ်နှင့်ခကျြမြားနှငျ့ခကျြကုန်းအမြင့်ဆုံးတောင်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအရှေ့မြောက်ပိုင်းဘိုဟီးမီးယား (အနောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်း Liberec ချက်ဒေသ, Hradec Kralove ၏အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသည်) နှင့်တောင်ဘက်ပိုလန် Silesia တည်ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်Sněžkaဧရာ (1603 မီတာ) ဖြစ်ပါသည်။ ကောလာဟလများအရဧရာမဒဏ္ဍာရီဝိညာဉျကိုKrakonošစောင့်ရှောက်လော့။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးသောတောင်ပေါ်နေရာများများထဲတွင်။
အဆိုပါဧရာအပါအဝင်ကျယ်ပြန့်တပြင်လုံးကိုတောင်တပြင်ပြီးသားဖြစ်ကောင်း (ဆိတ်တောင်တန်းအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော) ကိုဆဲလ်တစ်မူရင်းအမည် (အသုံးအများဆုံးသောတောင်ပေါ်ဝက်အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော) သို့မဟုတ်ဘော်လကန်ဇာစ်မြစ်ဖြစ်သော Sudetenland အဖြစ်ဖော်ပြထားရှေးအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ (85-165 ခန့်) တော်လမီ (ဖြစ်ကောင်းဧရာတောင်တန်းအပါအဝင် Lusatian တောင်တန်းမှ, မြို့ Askiburgium ဖျက်ဆီးအနီးတွင်အထူးသဖြင့်တောင်တန်း,) ဒီနေ့ရဲ့ Sudetenland အမည်များ Sudetayle (ထို Ore တောင်တန်း) နှင့် Askiburgion များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။3အတွက် Dio Cassius ။ ရာစုဟာ Vandalic Askiburgion တောင်များများအတွက် name ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယင်းမစ်မျိုးနွယ်စုမြေပုံပြီးနောက်တစ်ခုလုံးကိုတီးဝိုင်း (17 ။ ရာစု) တစ်ခု extension ကိုနာမကိုအမှီ Sudetenland ကို အသုံးပြု. အထက်ကနေချက်သမ္မတနိုင်ငံ Bohuslav Balbin နှင့် Pavel ရော့ခ်သို့ရောက်ကြ၏။
1095 ရုရှားရာဇဝငျထဲမှာဧရာမသူတို့ကိုယ်သူတို့ 1380 အတွက်ခကျြသစ်တောPřibík Pulkava အဆိုပါနှင်းဖုံးတောင်တန်းဟုခေါ်သည်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဧရာမတောင်တန်း name ကိုမူလကနှစ်ဦးစလုံးယနေ့မွငျ့မား Kolo နှင့်ဘွိုင်လာသို့မဟုတ်Kokrháčတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ အဆိုပါဧရာမတောင်တန်း marking (အနည်းကိန်းဣတ္ "ကို" ဧရာမတောင်တန်း) အခေါင်မှလုပ်ရပ် Vladislav II ကိုအတွက်ထို့နောက် 1492 အတွက် Wallenstein နှင့်Jilemnickýအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်တွင်ဌာနခွဲŠtěpaniceအိမ်ခြံမြေများ၏စံချိန်အတွက် 1499 ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ , ထိုနာမတျော၏ရှေးအကျဆုံးနျြမြေပုံအလုပ်လုပ်ခဲ့ 1518 အတွက်က Nicholas Klaudyán။ 1541 သူ၏ Chronicle အတွက် Wenceslaus Hajek ခကျြမြားနှငျ့ Silesian အဘိဓါန်ဧရာတောင်တန်း၏အမည်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ခေါင်းစဉ်Krkonošskéတောင်တို့, ဧရာတောင်တန်းကမ္ပည်းအဖြည့်မာရ်နတ်ပုံအခါမြေတပြင်လုံးတောင်တော်နာတိုးချဲ့မှု၏ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထား 1517 ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာမက Short name ကိုပထမဦးဆုံးတစ်နှစ် 1601 အတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အများဆုံးမကြာခဏထောင်ပြီးထင်းရှူးသို့မဟုတ်သောတောင်ပေါ်ထင်းရူးအဓိပ်ပာယျ, ဟောင်း Slavic အခြေစိုက်စခန်း "လည်ပင်း" သို့မဟုတ် "cracker" ၏တစ်ဦးဆင်းသက်လာဖြစ်စဉ်းစားသည်, Josef Jungmann တော်လမီတို့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဂျာမန်သို့မဟုတ်ဆဲလ်တစ်အနွယ် Corconti သို့မဟုတ် Korkontoi ၏နာမတျောနှငျ့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကြောင့် Asciburgius တူညီခဲ့သောတောင်ထိပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သောယူဆချက်နှင့်အတူ ယနေ့ဧရာတောင်တန်း (Korkontoi ဘယ်နေရာမှာမဆို Vistula ၏သတင်းရင်းမြစ်အနီး, ဒါမှမဟုတ် Beskydy မဟုတ်ဘဲအသက်ရှင်ရန်ရှိသည်မဟုတ်) ။ တချို့ကသုတေသန "ကျောက်တောင်စောင်း, ကျောက်တောင်ကိုလယ်" ဆိုလိုတာကပရိုတိုအခြေခံ၏အမည်များ၏ဇာစ်မြစ်အနက်ကိုဘော်ပြခြင်းနှင့်အရှေ့ Carpathian အတွက်ယူကရိနျး Gorgany တောင်များ၏အမည်နှင့်အတူ link တစ်ခုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဓိပ္ပာယ်ကိုဧရာတောင်တန်း (အင်္ဂလိပ် Riesengebirge, ဧရာတောင်တန်း) နဲ့ဂျာမန်ညီမျှ (1945 ဂျာမန်၏ကျယ်ပြန့်အများစုနေထိုင်ရာသည်အထိခကျြမြားနှငျ့တောငျအ Silesian အဘိဓါန်ဘေးထွက်ခဲ့သည်) 1546 ခုနှစ်တွင် Agricola (Georgius?) နွေရာသီအတွက်မှတ်သားထားတဲ့နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Risenberg ထံမှလာသည်။ မြေတပြင်လုံးတောင်ကိုအများကိန်း Riesengebirge ပထမဦးဆုံးတစ်နှစ် 1571 တှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့သည်။
ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာပုံစံများ၏အခြေစိုက်စခန်းဖွဲ့စည်းမှုပုံဆောင်ခဲ schists နှင့် Paleozoic အသွင်ပြောင်းကျောက်ဆောင် (svor) předprvohorní။ တောင်အရှေ့ပိုငျးမှာတော့မရှိသလောက်ထုံးကျောက်ကိုတွေ့သည်။ ရှေးဟောငျးအီဂ Crystalline တချို့နေရာတွေမှာစိမ့်ဝင်သွားတယ်နှင့်Krkonoše-Jizera pluton (ကျောက်) ။ အဲဒီမှာ Quaternary ရေခဲမြစ်အတွက်ဒေသခံရှုခင်းလုပ်ပါတယ်သောဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရေခဲမြစ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအချိုင့်ရေခဲမြစ်နှင့်ဒုတိယအမျိုးအစားစကင်ဒီနေးအမျိုးအစားခဲ့ကြသည်။ ကျယ်ပြန့်ကုန်းပြင်မြင့် (မာရျနတျရဲ့တောင်ကုန်းစတာတွေ) ကိုရေခဲမြစ်မှ၎င်း၏တည်ရှိမှုကြွေးတင်နေသည်။ ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအဘို့, ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုဖျောပွထားတဲ့ယမ်အတွက်ရေခဲမြစ်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဧရာမတောင်တန်း ဒါဟာတူပေလိမ့်မည်။ ရေခဲမြစ်ချိုင့်ဝှမ်း (Trog) လုပ်ပါတယ်သော Elbe ချိုင့်နှင့်ဧရာမိုင်းအဖြစ် glacial လှုပ်ရှားမှု၏အကောင်းဆုံးဥပမာ။ အဆိုပါ glacial cirques ၏အခြား glacial relicts (ထဲမှာ ဧရာမတောင်တန်း cirques) တံဆိပ် "တွင်း" ဟုလူသိများသည်။ ဒါဟာပိုလန်အတွက်ဘွိုင်လာတွင်းနှင့်နှင်းတွင်းဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်။ Kary အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ, တန်ဖိုးအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ဧရာမတောင်တန်း သူတို့ကိုအတွက်ဧရာမအရှားပါးဆုံးအပင်ရှိပါသည်ကွောငျ့, ကြည့်ရှုပါ။ အဆိုပါ cryogenic လှုပ်ရှားမှုများ ဧရာမတောင်တန်း ဒါဟာဥပမာ, ဖော်ပြရန်ကျောက်ကြီးပင်လယ် (တောင်စောင်းအမြင့်ဘီး) သို့မဟုတ်နှင်းခဲကမ်းပါးလိုအပ်ပေသည်။
အဆိုပါဧရာမတောင်တန်း၏ပိုင်နက်တွင်အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ relict နှင့်အစုလိုက်မျိုးစိတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ဧရာမတောင်တန်း သူတို့ကအများဆုံးဒေသများချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်သစ်တောအထက်တွင်လဲလျောင်းတွေ့ရသည်။ 1200-1300 အမြင့်မှာကဒီမှာအဆုံးဇုန်သစ်တော်။ တီးဝိုင်းပွတ်တိုက်အထက်, Nardus ကျောက်ခဲများနှင့်အပျက်အစီးများပင်လယ်ကပ်လျက်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့ဤအာတိတ်-အယ်လ်ပိုင်း tundra ဟုခေါ်တွင်သည်အလွန်ရှားပါးသောကျက်စားရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်များများသောအရပ်တို့ကိုငါတို့သည်ပင် bogs ရှာပါ။ မူရင်း Spruce သစ်တောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေထုညစ်ညမ်းမှု၏သက်ရောက်မှုများကပျက်စီးခဲ့သည်။ အနိမ့်အမြင့် Beech နှင့် Spruce ၏ monocultures မပေါက်ပါဘူး။ Malacofauna ဧရာတောင်တန်းခရု၏ 90 မျိုးစိတ်ပါဝင်သည်။
အဆိုပါဧရာမတောင်တန်း၏ပိုင်နက်တွင်ယခုနှစ် 36 ကြေငြာများနှင့် Karkonoski ပန်းခြံ Narodowy (KPN), 400 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူ 1963 1959 ၏ဧရာမတောင်တန်းအမျိုးသားဥယျာဉ် (KRNAP) ဧရိယာဟက်တာ, တည်ရှိသည်။ အမျိုးသားပန်းခြံ၏အကာအကွယ်ဇုန်ဧရိယာ 18 400 ဟက်တာ၏ခကျြဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 1992 အပြန်အလှန်ဇီဘေးမဲ့တောကုလသမဂ္ဂပညာရေး, သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (ထို 54 800 ဟက်တာ၏ခကျြစိတျအပိုငျးမြား၏ဧရိယာ) ကဟစျကျွောကွကတည်းကတောင်တန်းလည်းဖြစ်ကြသည်။ KRNAP ငါ II ကိုခွဲခြားသည်။ နှင့် III ကို။ ဇုန်ငါတန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင့်အဲ့ဒီ့ကာကွယ်မှု mode ကိုအပေါ်ကျရောက်ကျသောအကာအကွယ်ဇုန်။ ဤသည်ဥပမာကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါအစီအမံငါနှင့် II ကို။ ဇုန်ဟာသိသိသာသာတောင်တက်နှင့်နှင်းလျှောစီးလမ်းကြောင်းအပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုတားမြစ်သည်။ အဆိုပါဧရာမတောင်တန်း၏ပိုင်နက်တွင်လည်း Bird ကို Area နဲ့အသီးသီးတစ်ခုလုံးကိုဇီဝထုအရံဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အရေးကြီး Bird ကိုဧရိယာ, အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်မှုဇုန်အပါအဝင်အမျိုးသားဥယျာဉ်။
တောင်တန်းခကျြတောင်များအမြင်များ၏ harshest ရာသီဥတုအမှတ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ 1400 မီတာရာသီဥတုအထက်တွင်လဲလျောင်းထိပ်အစိတ်အပိုင်းများဂရင်းလန်းကမ်းခြေနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ အပူချိန်အဓိကအားဖြင့်အမြင့်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Trutnov အတွက်ပျမ်းမျှအပူချိန် 6,8 သည့်ဧရာမတောင်တန်း, ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်အပူချိန် 0,2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၏အအေးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထားတဲ့Sněžkaပေါ်တွင်နေစဉ်စင်တီဂရိတ်ဘွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအအေးဆုံးနေရာအရပ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာအတွက်မိုးရေချိန်ဟာအမြင့်နှင့်ဆင်ခြေလျှောတိမ်းညွတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လူသိများတကယ်တော့ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အနောက်တိုင်းလေထုစီးဆင်းမှုကလွှမ်းမိုးအဖြစ်တစ်နှစ်ကာလအတွင်းအနောက်နိုင်ငံများဧရာအတွက်ဘူတာရုံ, အရှေ့ပိုင်းတောင်များအတွင်းရှိဘူတာရုံထက်ပိုမိုးရေချိန်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာမိုးရွာသွန်းမှုမုန်တိုင်းများနှင့်မိုးရေချိန်စဉ်အတွင်းနွေရာသီလများတွင်ကျရောက်မတ်လထက်လျော့နည်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကြောင့်နှင်းကျ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကလျော့နည်းသိသာသည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဧရာမအမြင့်ဆုံးတောင်များပေမယ့်နှင့်ဧရာမပု Jizera တောင်တန်း၏မိုးရွာအရိပ်ထဲမှာလဲလျောင်းနေသောကြောင့်, အများဆုံးမိုးရွာသွန်းမှုကျကြပါဘူးရှာပါ။ ချိုင့်၌က 1300 မီလီမီတာ / တစ်နှစ်အထိရှိနိုင်ပါသည်နေစဉ်ကုန်းတွင်, 1500 မီလီမီတာ / တစ်နှစ်ဝန်းကျင်မိုးရေချိန်ပျမ်းမျှရောက်ရှိ။ အဆိုပါမိုးရွာသွန်းမှု၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများသင်တန်း၏ဆီးနှင်းသည်, ဧရာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဧရာမတောင်တန်းအတွက်ပထမဦးဆုံးနှင်း၏ဖြစ်ပျက်မှု၏ပျမ်းမျှနေ့စွဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ဆီးနှင်းအားလုံးနီးပါးနှစ်တွင်ကုန်း၏စကားမပွောနိုငျပါ။ ဒါဟာနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နိုဝင်ဘာလမှမေလသည်အထိပျမ်းမျှမိုဃ်းပွင့်ကုန်းပေါ်မှာလဲလျောင်းခဲ့သည်။ ဆီးနှင်း၏အကြီးမားဆုံးသောစုဆောင်းခြင်းဟာ leeward တောင်စောင်း (မိုဃ်းပွင့်အတိမ်အနက်မီတာ 15 အထိရောက်ရှိရှိရာမြေပုံသမ္မတနိုင်ငံ) တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မကြာခဏဧရာလေ၌ (အများဆုံးလေတိုက်နှုန်းSněžce 216 km / h မှာတိုင်းတာ) ခိုင်မာတယ်။
Previous post ဧရာမတောင်တန်း
next ကိုဆောင်းပါး ခကျြခကျြပရဒိသု